गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएपछि आकस्मिक कक्षमा भर्ना | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
गोविन्द केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएपछि आकस्मिक कक्षमा भर्ना
असार २१ गते, २०७५ - ०९:१४
शीर्ष समाचार, प्रदेश, प्रदेश न. ६
सुर्खेत । स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर बन्दै गएपछि वरिष्ठ हाडजोर्नी चिकित्सक डा गोविन्द केसीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा भर्ना गरिएको छ ।
पाँच दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत डा केसीलाई प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पताल, जुम्लाको आकस्मिक कक्षमा बुधबार साँझ भर्ना गरिएको हो । स्वास्थ्य निकै गम्भीर अवस्थामा पुगेपछि एम्बुलेन्सबाट उहाँलाई अस्पतालमा पु¥याइएको प्रतिष्ठानका मेडिकल डाइरेक्टर डा पूजन रोकायाले जानकारी दिए ।
“अनशनस्थल नै जोखिमपूर्ण भएको र उनको समस्या बल्झिन थालेपछि हामी अस्पताल लैजान बाध्य भयौँ,” डाइरेक्टर रोकायाले भने । डा केसीलाई अस्पताल पु¥याएसँगै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर बुढ्थापा र प्रहरी नायब उपरीक्षक डा तपनकुमार दाहालले उनीसंग भेट गरेका थिए ।
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरामा ध्यान दिएर डा केसीको उपचारका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्न चिकित्सकलाई निर्देशन दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुढ्थापाले बताए । यता डा विनोद अर्यालले एक्कासि डा केसीको मिर्गौला र छातीमा समस्या आएपछि उहाँलाई अस्पताल लैजानुको विकल्प नरहेको जनाए ।
डा अर्यालले भने, “निषेधाज्ञालाई तोडेर भएपनि उपचारार्थ डा केसीलाई प्रतिष्ठानमा पु¥याएका छौँ, आशा गरौँ स्वास्थ्यमा सुधार आउला ।” उनका अनुसार चिकित्सकको निरन्तर प्रयासले मात्र अस्पताल लान सम्भव भएको हो । नत्र डा केसीको जीवन झनै खतरायुक्त बन्दै जाने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनलाई सघन उपचार कक्षमा राखिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आएका उनले विभिन्न व्यवधानको बीच जुम्लाको विद्युत् लगायत कुनै सेवा नभएको कभर्डहलमा १५ औँ पटकको अनशन शनिबारदेखि शुरु गरेका थिए ।
आइतबारदेखि स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपनि सरकारले मागको सुनुवाइ नगरुञ्जेल अनशन नतोड्ने अडान उनले राख्दै आएका छन् ।
असार २१ गते, २०७५ - ०९:१४ मा प्रकाशित
विश्वको दोस्रो टेलिफोन कम्पनि हुवावेको सफलता र आरोपका कथा
चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेलिकम नेटवर्कको क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो । तर पछिल्लो...
विप्लवका दुई नेता नलपरासिबाट फेरी पक्राउ
नवलपरासि । प्रतिवन्धित नेकपाका जिल्ला यन्चाजए सहित दुईजनालाई सोमबार राति नवलपरासिबाट पक्राउ गरिएको...
कालिकोट । सोमबार विहान मात्रै पुर्वमा मेची कोशी व्युरो इन्चार्ज पक्राउ गरेको प्रहरीले सोमबार मध्यान्ह...
रुसी सैन्य विमान सेना र हतियार सहित भेनेजुयला पुगे –अमेरिकाले के गर्ला ?
एजेन्सी । रुसको सैन्य विमान सैयौं सेना र ठूलो मात्रामा हतियारसहित भेनेजुएला प्रवेश गरेको छ । दक्षिण...
काठमाडौं । फागुन २८ मा बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई राजनीतिक...
सरकार विप्लबप्रति झन कडा –गृहको अर्को आव्हान
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिवन्धित नेकपा अर्थात विप्लव समुहप्रति झन आक्रमक रुपमा...
सिता दाहालको स्वास्थ्यमा सुधार, प्रचण्ड परिवार खुशी
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको हाल...
उपेन्द्रको एकछत्र राज, गुमनाम पहाडी नेता
काठमाडौं । राजनीतिक पार्टीमा एक विशेषको भूमिका महत्वमा रहने र अरु गौण रहने कुरा सामान्य नै हो । तर कतिपय...
नेता कोइरालाले भने – पार्टीभित्र गुट हुनु स्वाभाविक हो
चितवन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र गुट हुनु स्वाभाविक भए पनि गिरोह हुनु...
बजारमा सुनको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? थाहा पाउँनुहोस्
काठमाडौं । आज आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य बढेको छ । आज सुनको मुल्य तोलामा रु ४०० रुपैंयाँले बढेको...
किन अवरूद्ध भयो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ?
चिठ्ठाकोे एक किलो सुनबाट एम्बुलेन्स खरीद
ठुलोबुबाले चलाएको ट्र्याक्टरको ठक्करबाट छोरोको घटनास्थलमै मृत्यु
सडकमा ब्रुमर, अब काठमाडौं सफा हुने
फेरि विप्लव समूहका तीन कार्यकर्ता घरैबाट पक्राउ
विप्लव आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन : मुख्यमन्त्री गुरुङ
भरतपुरका ईन्चार्जसहित विप्लवका चार जनाले दिए सामुहिक राजिनामा
यी सहमतिमा टुङ्गियो दाङ–सुर्खेत सडकको विवाद
बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सकेन